Rehôbôama - Wikipedia
I Rehôbôama na Rôbôama dia mpanjakan'i Israely fony ity fanjakana ity mbola tsy nivaky taorian'ny nahafatesan' i Sôlômôna (na Salômôna) rainy (taona 932 tal J.K.) ary lasa mpanjakan' i Jodà taorian' izany (nifarana tamin' ny taona 915 tal. J.K.). Izy no niteraka ny fisarahan' ny Fanjakan' i Israely ho fanjakana roa tsy nifanaraka, araka ny voalaza ao amin' ny Baiboly. Resahina indrindra ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 12–14) sy ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 10–12) ny ady maharitra nifanaovan' ny fanjakan' i Jodà tarihin' i Rehôbôama sy ny fanjakan' i Israely tarihin' ny mpanjaka Jerôbôama I.
2.1 Ny fianakaviany
2.2 Ny fivakisan' ny Fanjakan' i Israely ho roa
2.3 Ny fanapahany
2.4 Fitantarana taty aoriana
Atao hoe רְחַבְעָם / Rehav’am na Rehab’am ny anarany amin' ny teny hebreo fa Ροβοὰμ / Roboam na Rovoam kosa amin' ny teny grika. Amin' ny teny latina izy dia atao hoe Roboam. Ny Baiboly prôtestanta malagasy dia manoratra hoe Rehoboama fa ny Baiboly katôlika malagasy kosa manao hoa Roboama.
Ny tantatran' i Rehôbôama dia tsy hita afa-tsy ao amin' ny Baiboly. Tantatraina ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka (1Mpanj. 11.43–12.24; 14.21-31) sy ao amin' ny Boky faharoan' ny Tantara (2Tant. 9.31–12.16) i Rehôbôama. Resahina ao amin' ny Bokin' ny Tantara (1Tant. 3.10; 2Tant. 12.27; 2Tant. 13.7) sy ao amin'ny Bokin'ny Ekleziastika (Eklez. 47.23) ary ao amin'ny Evanjelin'i Matio (Mat. 1.7) koa i Rehôbôama.
Zanak' i Sôlômôna sy i Naama (hebreo: נַעֲמָה), vehivavy amônita, i Rehôbôama. Nandimby an-drainy izy tamin' ny faha-41 taonany. I Mahalata (na Makalata) sy i Maaka (hebreo: מעכה / Ma`akhah) no vadiny fantatra anarana nefa nanambady vehivavy 16 hafa koa izy sy vadintsindrano 60. I Maaka no vady tiany indrindra ka ny zazany taminy atao hoe Abiama no notendreny handimby azy teo amin' ny fitondrana. Nanan-janaka lahy miisa 28 sy zanaka vavy miisa 60 izay (2Tant. 11.18-23).
Ny fivakisan' ny Fanjakan' i Israely ho roaHanova
Toy ny mpanjaka rehetra tamin' izany vanim-potoana izany dia tsy maintsy nila ny fankatoavan' ireo foko 12n' i Israely ny mpanjaka ka nandeha tany Sikema (na Sekema) mba hahazo izany fankatoavana izany teo amin' ireo lehibem-pokon' i Israely. Izao no zavatra nangatahin' ireo foko ireo izay notarihin' i Jerôbôama I avy nisesy tany tany Egipta tao amin' ny farao Sesonka I (na Sisàka) (hebreo: שׁישׁק / Shîshaq): fampihenana ny hetra izay mavesatra loatra sy fanafoanana ny asa fanompoana noforonin' i Sôlômôna. Izany rehetra izany dia nataon' i Sôlômôna hanaingoana ny fanjakany tamin' ny androny.
Tsy nohenoin' i Rehôbôama ny hevitry ny mpanolotsain-drainy taloha izay nankasitraka ny fangatahan'ny vahoaka fa nanaraka ny an'ny mpanolotsainy manokana izay be hambom-po sy tsy niraharaha ny lafiny fitondrana izy. Nolavin'i Rehôbôama ny fangatahan'ny fokon'i Israely ka nirahiny tany amin'izy ireo i Adôrama lahiben'ny fampanaovana fanompoana. Tsy nanaraka an' i Rehôbôama ny foko any avaratra ka nandositra an' i Jerosalema ny mpanjaka. Novonoin'ny vahoaka i Adôrama ka nanangana fanjakana manokanana izy ireo, dia ny Fanjakan'i Israely izay nanangana an' i Jerôbôama ho mpanjaka.
Rehefa tafaverina tao Jerosalema i Rehôbôama dia nahita fa foko roa fotsiny no nanaraka azy, dia ny fokon' i Benjamina sy ny an' i Jodà. Nanangan-tafika izy mba hampiray an-keriny ny fanjakana roa, nefa ny mpaminany Semaia nandrara azy tsy hanao izany. Nanjaka tamin' ireo foko roa sisa ireo izy ka ny fanjakany dia natao hoe Fanjakan' i Jodà.
Rehefa nanapaka dimy taona i Rehôbôama dia nanafika an' i Jerosalema ny farao atao hoe Sesonka I (na Sisàka) ka nandroba ny Tempoly sy ny lapan' ny mpanjaka (1Tant. 14.25-26). Lasa nofehezin' i Sesonka i Rehôbôama ka namela ny fanaky ny Tempoly izay norobaina mba ho hetra alonany ho an' ny farao.
Araka ny voasotatra ao amin' ny Boky voalohan' ny Mpanjaka dia tsy tia vavaka i Rehôbôama sy ny vahoakany. Ny Bokin' ny Tantara anefa miresaka ny fisian' ny mpanjaka iray izay nitoky tamin' Andriamanitra nandritra ny telo taona, ka izany no nahatonga ny Levita any Avaratra hanaraka azy, talohan 'ny hialany azy. Ny mpanoratra ny Bokin' ny Tantara dia milaza fa ny fanafihan' i Sesonka (na Sisàka) dia sazy avy amin' Andriamanitra ka nahatonga an' i Rehôbôama sy ny vahoakany hiverina amin' ny fivavahana amin' Andriamanitra tokana izany. Io boky io dia miresaka koa ny fanorenana na ny fanamboarana indray ireo tanana mimanda tao amin' ny Fanjakan' i Jodà (2Tant. 11.5-12).
Fitantarana taty aorianaHanova
Ao amin' ny Boky faharoan' ny Tantara dia niteny mafy ny tafik' i Jerôbôama i Abiama (na Abia) zanak' i Rehôbôama ka nanameloka ny fivakisan' ny fanjakana ho roa sady nilaza fa lehilahy "tanora sy saro-tahotra" ny rainy izay "tsy ampy hery eo anatrehany" sady tsy hahatohitra ny fiokoan' ny foko any Avaratra (2Tant. 13.7).
Ao amin' ny Bokin' ny Ekleziastika dia milaza i Bena Siràka fa lehilahy "tsy misaina teo anatrehan' ny vahoaka i Rehôbôama izay tsy nanam-pitandremana (Eklez. 47.23).
Mpanjakan' i Jodà:
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Rehôbôama&oldid=1042021"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 11:33
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 11:33 ity pejy ity.